Pirojektii misooma laggeen Finfinnee, Obbo Balaayineh Kindee: ''Irbaata nyaachuuf miti kan deemnu'' - BBC News Afaan Oromoo
Pirojektii misooma laggeen Finfinnee, Obbo Balaayineh Kindee: ''Irbaata nyaachuuf miti kan deemnu''
Image copyright Daniel Kibret
Goodayyaa suuraa Galma nyaataa Atsee Miniliik amma haroomfame
Laggeen magaalaa Finfinneefi qarqara isaanii misoomsuuf kan oolu irbaanni tokko qarshii miiliyooni 5 itti bahe har'a taasifama.
Karoorri kuni MM Abiy Ahimadin kan karorfame yoo ta'u 'Gabataa La Shaggar' jedhame mogga'eera.
Sagantaa kana irrattis MM Abiy Ahimadiifi hoggantoonni mootummaa olaanoo kan irratti argaman yoo ta'u hirmaattota sagantaa kana irratti hirmachuuf waa gumaatanif wanti isaan itti yaadataman akka qophaa'e himameera.
Sagantaa har'a waaree booda (Dilbata) taasifamuuun achuma dallaa masaraa keessatti keessummoonnni daawwannaa ni taasisu.
MM Abiy Ahimad waliin irbaata nyaachuuf miiliyoona 5 baastuu?
Finfinnee: Magaalaa waan hundaan ukkaamamtuu
Daawwannaan kunis masaraawwan durii haaromfamaa jiraniifi mooraa masaraa mootummaa bifaa haaraan gurmaa'aa jiru akka ta'e beekameera.
Irbaatni har'aas galma nyaataa Atsee Miniliik masaraa kiiloo 4 keessa jiru bifa haaraan haaromfame keessatti ta'a.
Sagantaa kana irratti hirmaachuuf dhaabbileefi namoonni hedduu kan galmaa'an yoo ta'u kaampaaniin BK Group jedhamuufi abbummaan isaa dureessa Obbo Balaayinah Kindee ta'e tokkodha.
''Akka abbaa qabeenyaa tokkootti Shaggar akka jijjiiramtu fedha keenya,'' kan jedhan Obbo Balaayinan kaayyoo isaa deeggarani deeggarsa maallaqaa akka taasisan himu.
Sagantaa har'aa irratti akka hirmaatan himuun ''achumaanis irbaata keenya affeeramna,'' jedhaniiru.
''Nyaata soorachuuf miti kan deemnu,'' kan jedhan Obbo Balaayinan ''namni qabeenya qabu waliin ta'un magaalota yoo guddise biyyi ni guddata'' yaada jedhu qabu.
Har'a sa'aatii 9:00'tti akka argaman waraqaan waamichaa kan isaan gahus nutti himaniiru.
Image copyright @PMEthiopia
Goodayyaa suuraa Pirojektiin kuni yeroo raawwatu waan fakkaatu
Magaalota Afrikaa biroo akka ilaalaniifi Finfinnee irraa fooyyee akka qaban xiiqiin kan dubbatan Obbo Balaayinan ''biyya dhuunfaadhaan misoomsuun danda'ama ta'a, akkana gareedhaan ta'un misoomsuun faayidaa qaba,'' jedhaniiru.
Affeerraan irbaataan kuni galma mootii duraanii Atsee Minilikitti akka gaggeeffamu kan ibsame yoo ta'u, hanga yoonaa namoonniifi dhaabbileen 200 ol hirmaachuun gahee ofii gumaachuuf galmaa'un isaanii himameera.
Karoorri kuni maali?
Karoorri magaalaa Shaggar ykn Finfinnee misoomsuuf yaadame pirojektii MM Abiyyin qixaa'eefi waggaa sadiif kan turudha.
Qarqara gaara Xiixaa ykn Inxooxxoodhaa hanga Aqaaqii kan fagaatu km56 kan dheeratu ni misooma jedhames yaadameera.
Yeroo pirojektiin kuni dhugoomu maqaan namoota affeerraa irbaataa kana irratti hirmaatan qofaatti barraa'ee kan taa'u yoo ta'u MM Abiy waliinis qofaatti suuraa ni ka'u jedhame yaadama.
Kunis, namoota Finfinnee misoomsuu keessatti gahee gumaachan jechuun walitti qabame taa'a kan jedhame.
Waajjirri MM affeerraa har'a taasiseen hoggantoonni dhaabbileefi abbootiin dhuunfaa, akkasumas miseensonni dippilomatikii affeerraa irbaataa kana irratti akka argaman affeeraniiru.
Pirojektiin kaampaanii Vaarnerootiin hojjetamu kuni bareedina magaalaa Finfinnee guddaa fooyyeessa jedhame yaadama. Baasii biliyoona 29'f gaafateera.
Finfinnee: Magaalaa jireenyaaf hin mijoofne
8 Onkololeessa 2018
6 Elba 2018